Bogga ugu weyn Waa kuma Ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA? | 10 -ka Ciyaaryahan ee ugu sarreeya NBA -da Adduunka
Ciyaartoyda Ururka Kubadda Koleyga Qaranka (NBA) ayaa ka mid ah ciyaartooyda ugu mushaarka badan adduunka. In kasta oo inta badan ciyaartoydu ay helaan malaayiin sanad walba, dhowr ayaa ku sii jira kuwa ugu mushaharka badan adduunka.
Sanadkii 2020, Steph Curry, LeBron James, iyo Kevin Durant ayaa lagu qoray Forbes inay yihiin qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu qanisan. Haddaba dadka xiiseeya kubbadda koleyga ayaa aad u xiiseynaya waa kuma ciyaaryahanka ugu mushaarka badan NBA?
Maqaalka, waxaad ku ogaan doontaa qofka ugu mushaarka badan NBA.
Ciyaartoyda NBA Lacag ma la siiyaa Toddobaadle?
Inta lagu jiro xilliga, ciyaartoyda NBA sida caadiga ah waa la siiyaa mushahar isbuuciiba. Laakiin waxay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan jadwalka lacag bixinta heer shaqsiyeed.
Waa Maxay Mushaharka Ciyaaryahanka NBA ee Dhexdhexaadka ah?
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, caannimada NBA -da ayaa si weyn u korortay, taasoo horseedday in si weyn loo kordhiyo mushaharka cayaartoyda. Sannadka 2019, celceliska mushaharka NBA -ga ayaa dhammaaday 8.32 milyan oo doolarka Mareykanka ah ciyaaryahan walba.
Waa kuma Ciyaaryahanka NBA ee ugu mushaarka badan abid?
Ciyaaryahanka NBA ee ugu mushaarka badan abid: Kevin Garnett
Dakhli xirfadeed: $ 334.3 million
Kevin Garnett wuxuu haystay fursad naadir ah oo uu ku arki karo xirfadiisa NBA inay noqoto goob wareegsan. Wuxuu ahaa xulkii shanaad ee qabyo -qoraalka 1995, wuxuuna la qaatay tobaneeyo xilli Minnesota Timberwolves.
Kevin Garnett wuxuu helay 10 xiddigood oo xiddigle ah iyo MVP, laakiin Timberwolves ayaa guuldarreystay muddo toddoba sano ah wareegii koowaad iyo hal mar oo ah finalka shirka. Wax yar ka dib, Timberwolves wuxuu Garnet ka ganacsan jiray Boston Celtics. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay, Garnett wuxuu ka caawiyay Celtics inay ku guuleysato horyaalnimada NBA.
Garnett wuxuu u ciyaaray Celtics shan sano oo dheeri ah ka hor inta aan lagu iibin Brooklyn Nets. Fanaaniinta kubbadda koleyga waxay xusayaan ganacsiga inuu yahay wax laga xumaado. Ka dib 96 kulan oo uu u saftay Brooklyn, Garnett wuxuu ku laabtay Timberwolves, halkaas oo uu ka fariistay.
Waa maxay qiimaha ugu sarreeya ee Ciyaaryahanka NBA ee ugu mushaarka badan 2021?
Sidaad u maleyn lahayd, LeBron James wali wuxuu hayaa marada. In kasta oo COVID-19 uu ka gaabiyey oggolaanshaha, Boqorka wuxuu helay lacag dhan 64 milyan oo doolar oo jeegag ah iyada oo loo marayo wadadan.
$ 64 milyan oo doollar oo lagu daray 31.4 milyan oo doolar oo mushaharkiisa ah ayaa ku filnaa inuu Boqorka ka dhigo kan ugu sarreeya Forbes '2021 ee uu ku kasbaday darajooyinka ciyaartoyga NBA.
Waxaa xusid mudan; King LeBron ayaa heshiis weyn la saxiixday PepsiCo kadib markii uu ka baxay heshiiskiisii ​​muddada dheer ee Coca-Cola horaantii sanadkan. Wuxuu hayey AT&T, Nike, Beats, Walmart, GMC, Blaze Pizza, iyo iskaashiyada ansaxinta Rimowa.
10 -ka Ciyaaryahan ee ugu mushaarka badan NBA
Country of Origin: Maraykanka Maraykanka
Dhalashada: Maraykanka Maraykanka
MUSHAHARKA: USD 31.4 milyan
Qiimo sareeya: USD 500 Milyan
Tartamadii Guulaystay: 4 horyaalnimada NBA
Kooxda: Los Angeles Lakers
In kasta oo xiisadda COVID-19 ee hadda jirta, oo hoos u dhigtay oggolaanshaha adduunka, King James wuxuu ku guuleystey inuu sii hayo taajkiisa. Isugeynta mushaharkiisa iyo kaabisyadiisa ayaa ku siineysa $ 95.4 milyan oo doollar, wadar ku filan in lagu meeleeyo booska ugu sarreeya liiska Forbes '2021.
LeBron James sameeyey lacagtan waalida ah walow uu ka guuray heshiiskii muddada dheer ee uu la lahaa Coca-Cola.
Qiimo sareeya: USD 150 milyan
Tartamadii Guulaystay: 3 horyaalnimada NBA
Kooxda: Warriors State Golden
Ilaaha wax tooganaya Steph Curry ayaa qabta booska labaad ee dakhliga ugu badan ee NBA sanadkan. Ciyaaryahankii labada jeer ugu qiimaha badnaa (MVP) wuxuu sameeyay si weyn USD 74.4 milyan sanadka oo dhan.
Qaybta ugu muhiimsan ee dakhligiisu wuxuu ka yimid mushaharkiisa. Horumarka ugu muhiimsan ee ilaaha toogashada ah wuxuu ku dhawaaqayay kabaha cusub ee Under Armor, dharkiisa, iyo agabyada kala duwan ee ciyaaraha kala duwan.
Heshiiska Under Armor ayaa la saadaalinayaa inuu ka dhigi doono 20 milyan oo doollar sannad kasta haddiiba uu bilowdo. Heshiiska ayaa u macaan Steph, kaasoo kaliya seegay shan kulan xilli ciyaareedkii hore isagoo ka soo kabsaday gacan ka jaban.
MUSHAHARKA: USD 31.2 milyan
Qiimo sareeya: USD 170 milyan
Tartamadii Guulaystay: 2 horyaalnimada NBA
Kooxda: Shabakadaha Brooklyn
KD, oo ah MVP hore, wuxuu sameeyay dhibco weyn bishii Diseembar markii Uber, oo ah farsamo yaqaan tikniyoolajiyadeed, uu iibsaday Postmates, oo ah shirkad cunto-gaarsiin ah, lacag dhan USD 2.65 bilyan. Saaxiibbadii waxay ahaayeen bilow, oo KD ay maalgelisay.
Forbes wuxuu sheeganayaa in KD u beddelay maalgashigiisii ​​1 milyan ee USD USD 15 milyan ixtiraamka iibsiga. Intaa waxaa dheer, qandaraaska Durant waa sida isaga oo kale.
MUSHAHARKA: USD 33 milyan
Tartamadii Guulaystay: 0 horyaalnimada NBA
Kooxda: Wizards -ka Washington
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay xiiso u lahaayeen Russell Westbrook. Kooxo fara badan iyo qaabab qaabaysan ayaa hoos u dhigay kaydkiisa laakiin ma aysan dhicin dakhligiisii ​​shaqo. Sannadkii hore, MVP -kii hore ayaa sameeyey USD 58.1 milyan, gaar ahaan heshiiskii uu la galay shirkadda Nike.
Qiimo sareeya: USD 145 milyan
James Harden, oo caan ku ah Garka, wuxuu leeyahay mid ka mid ah qandaraasyada ugu cajiibka badan NBA -ga, waana soo bandhigaysaa. Garka ayaa hadda helaya ciriiri USD 33 milyan oo mushahar ah, isaga oo ku haya qaab wanaagsan.
Intaa waxaa dheer, dabayaaqadii sanadkii hore, Beard wuxuu ku dhawaaqay inuu maalgashaday Pura, oo ah nooc udgoon. Waxa kale oo uu ka haystaa Boby Armor, Stance, iyo Art of Sport.
Country of Origin: Giriigga
MUSHAHARKA: USD 22 milyan
Qiimo sareeya: USD 70 milyan
Maahan wax la yaab leh in Forbes ay liis gareyso labada jeer MVP mid ka mid ah ciyaartooyda ugu mushaarka badan 2021. Dabayaaqadii sanadkii hore, Giannis wuxuu qalinka ku duugay heshiiskii ugu naxdinta badnaa taariikhda NBA.
Giriigga Freak wuxuu xaqiijiyey heshiis kordhin shan sano ah Milwaukee Bucks, oo qiimaheedu aad u sarreeyo USD 228 milyan. Markay tahay 26 sano, Giriigga Freak waa mid ka mid ah xiddigaha NBA ee ugu da'da yar liiskaan. Sidaa darteed, waxaa la saadaalinayaa in saamiyadiisu ay kor u kici doonto labada sano ee soo socda, gaar ahaan Disney oo heshiis kula jirta.
Sida la sheegay, madadaalada madadaalada ayaa xirtay xuquuqdii ay ku sameyn laheyd filim Giannis, taasoo muujineysa safarkii noloshiisa ee ka yimid Mount Olympus si uu ugu dhexmaro meelaha NBA -da. Forbes ayaa xaqiijiyay in filimkan la sii deyn doono 2022 -ka.
MUSHAHARKA: USD 28.3 milyan
Qiimo sareeya: USD 60 milyan
In kasta oo ay soo mareen dhaawacyo aan nasiib lahayn oo ku socda taariikhda isboortiga, Klay Thompson ayaa wali qasaya waraaqda. Waardiyaha Dahabka ee Dahabka ah soo bandhigay astaanta CBD, Kaliya Noolow. Intaa waxaa sii dheer, Dhaawaca All-Star wuxuu leeyahay heshiisyo aad u weyn oo Anta, Mercedes-Benz, iyo Kaiser Permanente, iyo kuwo kale.
Dhalashada: Australia iyo Maraykanka
MUSHAHARKA: USD 26 milyan
Qiimo sareeya: USD 90 milyan
Tartamadii Guulaystay: 1 Horyaalka NBA
Bilowgii sannadka ayaa aad ugu xiiso badnaa ilaalada Brooklyn; nasiib wanaag, wax badan ma aysan saamayn durdurradii lacagtiisa. Sannadkan, Kyrie waxay ku kala tagtay qaab ahaan USD 900,000 jebinta ciyaaraha ka boodka iyo ganaax dhan $ 50,000 si aan loo ilaalin hab-raaca COVID-19.
MUSHAHARKA: USD 33.1 milyan
Qiimo sareeya: USD 130 milyan
Kooxda: Phoenix Suns
In kasta oo uu liiskan ku leeyahay dakhliga ugu hooseeya ee oggolaanshaha, haddana dhibicda ilaah ayaa ku guulaysatay inay hesho $ 40.1 milyan oo doollar. Chris Paul waa guddoomiyaha Ururka Ciyaartoyda NBA ee talada haya, tanina waxay siisay qandaraas aad u weyn, kaas oo kor ugu qaaday kooxdiisii ​​3aad tan iyo markii uu qalinka ku duugay. Waxa uu heystaa bedel xilli ciyaareedka soo socda qiimihiisu yahay USD 44.2 milyan in qof kasta oo miyir qaba oo kabaha xiranaya uu qaadan doono.
MUSHAHARKA: USD 25 milyan
Kooxda: Raad -raacyaasha Portland
Damian Lillard wuxuu soo koobay tobanka ugu sarreeya sanadkan liiska dakhliga ugu sarreeya NBA. Xiddiga reer Portland Trailblazers iyo soo noqnoqda All-NBA waxay lacagtooda ku heleen taageerooyin iyo iskaashiyo cusub.
Ka sokow dakhligiisa cajiibka ah, superstar -ka Trailblazers wuxuu kaloo daaha ka rogay barnaamij tababar sanadle ah sannadkii hore lix arday oo baahan oo dhigta dugsiyada sare ee Chicago, Los Angeles, iyo New York.
In kasta oo ay jirto Xiisadda Caalamiga ah ee hadda jirta, xiddigaha NBA -da ayaa weli ku jira lacag badan. Sidaa darteed, waxaan ku talin karnaa in xiddigaha la taxay ay si weyn kor ugu kici doonaan qiimahooda sannadka soo socda.
Sida laga soo xigtay Forbes, King James ayaa la filayaa inuu hanto bilyantiisii ​​ugu horreysay sannadkan haddii wax walba sidii loogu talagalay u dhacaan. Sidaa darteed, dhammaanteen waxaan haynaa neeftayada waxaanan rajeyneynaa inuu sameeyo.
Shaqaalaha korontada ee ugu mushaarka badan USA | 10 Dawladood ee Ugu Fiican
Magdhowgu si joogto ah waa qaybta ugu muhiimsan ee xirfadda ee shakhsiyaadka badankooda ee ku jira codbixinta guud ahaan…
15 KAALOOYINKA UGU FIICAN BANGALORE 2022
Bal qiyaas adduun ay wax walba ku shaqeeyaan si waafaqsan qorshayaashaada, halkaas oo aad si buuxda mas'uul uga tahay…
Khadka Dib -u -eegista Chase 2021: Si Degdeg Ah U Kordhiso Ogolaanshaha Oggolaanshahaaga Deynta
Waxaa laga yaabaa inaad tahay musaafir khibrad leh ama raadinaya dalab gunno qaali ah, waxaad leedahay wax weyn…
Dib u eegida Wealthfront 2021 | Sharci ama khiyaamo, sida ay u shaqeyso
Weligaa ma maqashay ereyga 'robo-advisor revolution' oo ma la yaabtay waa maxay? Ama waxaad u badan tahay inaad maqashay…
15 Qalabka Waxsoosaarka ee Shaqaalaha Fog ee 2022ka
Intii lagu jiray masiibada, shaqo badan ayaa fogaatay. In kasta oo xannibaadihii si tartiib tartiib ah looga qaaday dalal badan,…